Uyigcina njani idatha yakho kwi-iCloud
NguJoe Hutsko, uBarbara Boyd, uJesse Feiler, uDoug Sahlin
ICloud igcina kude kwaye ivumelanisa idatha ofikelela kuyo kwizixhobo ezahlukeneyo- iMac yakho kunye nezinye izixhobo zeApple, ezinje ngeePhones, iiPads, neePods, neePC eziqhuba iiWindows. Sayina ungene kwiakhawunti efanayo ye-iCloud kwizixhobo ezahlukeneyo, kunye nedatha yeeapps ezisebenzayo Ungqamaniso; Oko kukuthi, ufumana idatha efanayo kuzo zonke izixhobo zakho, kwaye xa usenza utshintsho kwisixhobo esinye, sibonakala kwezinye. ICloud isebenza ngeziapps zilandelayo kunye nedatha engaphakathi kuzo:
Abafowunelwa (abaziwa njengeNcwadi yeeDilesi kwiinguqulelo zangaphambili zeMac OS X)
Ikhalenda (eyaziwa njengeICal kwiinguqulelo zangaphambili zeMac OS X)
Iibhukumaka zeSafari, uluhlu lokufunda, iithebhu kunye nembali yokujonga
Iifoto ezivela kwi-iPhoto kunye nokuvula
iTunes kunye nomabonwakude
Ii -apps zeWork (Amaphepha, iinombolo, kunye neKeynote)
ICloud nayo isebenza kunye ne-third-party iCloud-enabled apps, ezifana ne-IA Writer.
Nazi ezinye zeemeko apho iCloud inokwenza ubomi bakho bube lula:
Ufuna ukugcina iingoma ozongezayo kwi-app yoMculo kunye nokuqokelelwa komboniso weTV.
Usebenzisa zombini iMac kunye nesixhobo se-iOS, njenge-iPhone, i-iPad, okanye iPod touch.
Ufuna ukufikelela kuQhakamshelwano, iKhalenda, kunye neMeyile ukusuka kwenye ikhompyuter- iMac okanye iiWindows- yithi, enye yeyomsebenzi kunye neyasekhaya.
Ugcina ikhalenda abanye abantu ekufuneka beyibonile kwaye mhlawumbi bade bahlele nayo.
Ufuna ukuvula i-Mac yam ukugcina iithebhu kwindawo yakho ye-Mac kwaye uyifumane kwakhona ukuba ilahlekile okanye ibiwe.
Ukusekwa kokuqala kwi-Mac yakho okanye ukudala i-ID ye-iCloud ye-Apple kusebenze iakhawunti yakho ye-iCloud kwaye ubeke ikopi yedatha kwiMeyile, Abafowunelwa, iKhalenda, amaNqaku, izikhumbuzo kunye neSafari ukusuka kwi-Mac yakho ukuya kwilifu (Oko kukuthi, iApple izixhobo zokugcina idatha). Apha, sikubonisa ukuba usebenza njani ngokukhetha iCloud, izixhobo zokuvumelanisa, kwaye ungene kwaye usebenzise iwebhusayithi ye-iCloud.
Ukuba usebenzisa iWindows PC ukongeza kwi-Mac yakho, unokukhuphela ifayile ye ICloud Control Panel 3.0 yeWindows , eyenza ukugcinwa kwe-iCloud kunye nokuvumelanisa kwiWindows. Ngoku ungena kwii -apps zeICloud nge-ICloud.com kunye neMicrosoft Outlook.
Uluqwalasela njani ukhetho lwe-iCloud
Unokukhetha ukuba zeziphi iiapps ofuna ukuzisebenzisa ngeICloud kunye nendlela ezinokusetyenziswa ngayo. Umzekelo, unokufuna ukugcina abafowunelwa kunye neekhalenda zivumelanisiwe kuzo zonke izixhobo zakho kodwa ukhetha ukuba iiNqaku zihlale zahlukile kuba usebenzisa iiNqaku kwi-iPhone yakho kuludwe lwezinto ongazidingiyo kwi-Mac yakho. Nantsi indlela yokwenza ngokwezifiso indlela osebenza ngayo ne-iCloud:
1. Khetha iApple → Ukukhetha kweNkqubo emva koko ucofe iqhosha kwiakhawunti ye-Intanethi.
Uluhlu lwamachiza amiselweyo
Iwindows Akhawunti yewindows iyavela.
2. Ukuba awukangeni ngemvume kwi-iCloud, cofa indawo ethi Ngena, faka i-ID yakho ye-Apple kunye negama lokugqitha, kwaye ucofe ukungena.
3. Cofa iCloud.
Iwindow ye-iCloud ibonakala ibonisa ulwazi lweakhawunti yakho ye-iCloud.
4. Cofa indawo ethi Khetha ekunene kwi icon ye-iCloud Drayivu.
Iwindow yokukhetha yeICloud Drive ibonakala. Le festile ikwenza ukwazi ukukhetha amaxwebhu agcinwe kwi-iCloud.
Chaza ukuba ngawaphi amaxwebhu agcinwe kwi-iCloud drive yakho.
5. Chaza ukuba ngawaphi amaxwebhu ofuna ukuwagcina kwi-iCloud drive yakho.
Cofa uphawu lokutshekisha oluhambelana ne-app nganye enamaxwebhu ofuna ukuwagcina kwi-iCloud drive yakho.
6. (Ngokuzithandela) Cofa kuLawulo iqhosha elisezantsi ekunene ukuze ubone idatha egcinwe kwi-iCloud oyabelweyo, njengoko kubonisiwe.
Cofa into nganye kuluhlu olungasekhohlo ukuze ubone iifayile nganye. Izipele (ngaphezulu kolu luhlu) zigcina i-backups zezixhobo zakho ze-iOS- ayisiyiyo iMac yakho. ICloud igcina amaxwebhu kunye nedatha kwii -apps ezinikwe amandla yi-iCloud kodwa ayikugcini iMac yakho yonke.
Lawula ukugcinwa kweapps ofuna ukuzisebenzisa ngeICloud.
7. (Ngokuzithandela) Cofa indawo ethi Thenga ngakumbi yoGcino.
Iakhawunti yasimahla ye-iCloud ikunika iigigabytes ezintlanu (i-GB) zokugcina - kodwa iingoma ezithengwe kwiVenkile yoMculo ye-Apple okanye ukuya kuthi ga kwiitayile ezingama-25,000 kwiTunes Match (ukuba ubhalisile) kunye neefoto kwiFotoStream musa ukubala kuloo mali. KwiFotoStream, iCloud igcina ukuya kuthi ga kwiifoto ezili-1 kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo. Unokuthenga okongeziweyo umrhumo wonyaka wobhaliso xa kukho imfuneko, njengoko kubonisiwe.
Ukuba uthatha isigqibo sokuthenga ugcino olongezelelweyo, cofa imali oyifunayo kwaye ucofe ulandelayo. Landela imiyalelo ekwiskrini ukongeza ulwazi lwakho kunye nentlawulo.
Nyusa kwaye wandise ugcino lwakho lwe-iCloud apha.
8. Cofa ugqibile.
9. Cofa uQhobosha kwiqhosha elingasentla ekhohlo ukuyeka Ukukhetha kweNkqubo.
Ukuvumelanisa nezinye izixhobo
Isizathu esona sizathu sokuba esi sihloko sinesihloko saye sime ngokucacileyo kuba ayinakuba lula. Ukuvumelanisa amaxwebhu athile e-iCloud, njengamaxwebhu amaPhepha, kunye nedatha evela kwiiapps ezinjengeKhalenda kunye nabafowunelwa kwizixhobo zakho ze-iOS, yenza oku kulandelayo:
1. Cofa Useto kwiscreen seKhaya kwesixhobo ofuna ukusivumelanisa neICloud.
2. Thepha iCloud.
3. Sayina ungene kwiakhawunti yakho ye-iCloud.
meclizine 25 mg ithebhulethi
4. Cofa iiapps ofuna ukuzisebenzisa kwindawo leyo.
Idatha kwi-app nganye iyavumelaniswa ngokuzenzekelayo phakathi kweMac yakho kunye nesixhobo sakho se-iOS.
Kuya kufuneka unonxibelelwano lwe-Intanethi ukuze usebenzise iCloud.
Sebenzisa iwebhusayithi ye-iCloud
Ukulawula idatha yakho kwi-iCloud, ungaya kwiwebhusayithi ye-iCloud. Landela la manyathelo:
1. Cofa i-icon ye-Safari kwi-Dock okanye kwi-Launchpad.
2. Chwetheza www.icloud.com kumhlaba we-URL eSafari.
Iwebhusayithi ye-iCloud ivula ngophawu kwimihlaba.
3. Chwetheza i-ID yakho ye-Apple okanye i-imeyile oyisebenzise xa useta iakhawunti yakho ye-iCloud, emva koko uchwetheze igama eligqithisiweyo.
Sayina ungene kwiakhawunti ye-iCloud.
4. (Ngokuzikhethela) Khetha uNdigcine ndityikitye kwibhokisi yokukhangela ukuba ufuna ukuhlala uqhagamshele kwi-iCloud nokuba uya kwezinye iiwebhusayithi okanye uyeke iSafari.
5. Cinezela iqhosha lokungena okanye ucofe iqhosha lokucofa.
Igama lakho liyavela kwikona ephezulu ngasekunene, kwaye ii-icon ezikusa kwiinkonzo zakho ezisebenzayo zivele efestileni, njengoko kubonisiwe.
Cofa ii icon ukuya kwidatha oyifunayo.
6. Cofa nayiphi na i icon ukuya kusetyenziso olifunayo.
7. Ukusuka kwi-app yeefestile, cofa iqhosha lefu kwikona ephezulu ngasekhohlo ukubuyela kwiphepha lewebhu le-iCloud.
8. Cofa utolo olusekunene kwegama lakho uze ukhethe ukuphuma ungene ukuvala iCloud.com.
Qaphela ukuba xa uphuma, unokhetho lokuthemba isikhangeli osisebenzisayo kwaye awuzukufuna ukuthemba isikhangeli ngexesha elizayo xa ungena kwiwebhusayithi ye-iCloud.
ukupakisha amaxabiso e-antibiotic
umdlalo weetrone ixesha lesithathu
kude kube nini ukuba losartan asebenze
zingaphi amaso kwirosari
amayeza okunyusa uxinzelelo lwegazi